Galfata Kasaa Saagi
Yammuu galfatoota filattee saagdu, qaaqa Galfata Kasaa Saagi dhissuu nidandeessa.
Barruu isa galmee keessaa filatame agarsiissa. Yoo barbaade, galfata kasaaf jecha addaa adda galchu nidandeessa. Galmee keessaa barruun filatame hinjijjiiramu.
Filannoo ammaa isa ati bakka kanatti galchite, akka galfata xixiqqaa jechichaa godha. Fakkeenyaaf, akka furtuu 1ffaatti yoo "qorraa" filattee, "akkaataa qilleensaa" galchiitte, galfati kasaa "akkaataa qilleensaa, qorraa" taha.
Filannoo ammaa galfatoota xixiqqaa kan furtuu 1ffaa taasiisa. Fakkeenyaaf, akka furtuu 1ffaatti yoo "qorraa" "ganna" akka furtuu 2ffaatti filattee, galfati kasaa "akkaataa qilleensaa, ganna, qorraa" taha.
Galfatoota walfakkiidhaaf, dubbisa qooqessii galchi. Fakkeenyaaf, Yoo jechii Jaapaanii Kaanjii akkaataa afaaneffannoo tokko ol qabaatee, jecha afaaneffannoo akka Katakanaa galchi. Jechi Kaanjii jedhamuu, akkaataa dubbisa qooqessii galfataati foo'ama. Dirqalii kun kan jiraatu, yoo gargaarsii Afaan Eeshiyaan angeefame qofa.
Barruu filatame galfata guuddaa kasaa aabaa keessaa taasiisa. LibreOffice lakkoofsa fuulaa kan galfata guuddaa dhangii adda addaa keessaa irra caalaa, kan galfatoota ka biroo kasaa keessaa agarsiisa.
Dirqalii kun kan jiratuu galfatoota kasaa qabeentaa fi hiika-fayyadamaatiif qofa.
Barruuwwan walfakkatoo maraaf fayyadami
Ofumaan, taateewwan ka biroo mara, galmicha keessaa barruu filataman mallatteessa. Barruun, irraantoowwanii, miiljaleewwanii, goodayyaawwanii, qabiiwwanii keessaa, hin hammatamaani.
Qaaqa kan keessatti, dalaga Galfata dhaaf hujeekaan galchitee fayyadamuu hindandeessu.
Taateewwan kan dabartii barruu tokko kasicha keessaa hundaa itti dabaaluudhaaf, barricha filiitii, Gulaali - Barbaadi fi Bakkabuusi filadhu, kana booda Mara Barbaadi irra cuqaasi. Eegasii Saagi - Kasaalaa fi Gabateewwan - Galfata filachuun Saagi cuqaasi.
Jecha guutuu qofa
Kasaa hiika-fayyadamaa haaraa
Iddoo kasaa maamiloo itti uumuu dandeessu, qaaqa Kasaa Hiika-Fayyadamaa Haaraa uumi bana.
Kasaa hiika-fayyadamaa isa haaraadhaaf, maqaa tokko galchi. kasaa inni haaraan tarree kasaawwaniif gabateewwan jiranii keessatti idaa'ama.
Qabeentaa fi Kasaawwan fayyadamuun
Title is: Galfata Kasaa Saagi